चीन-भारतबीच उत्पन्न त,नावको चु,नौती विश्लेषण गर्दै नेपाली सेना…हेर्नुहोस!
काठमाडौं,। चीन र भारतबीच उत्पन्न त,नावले नेपालको आ,न्तरिक सु,रक्षामा के प्र,भाव पार्न सक्छ ? जं,गीअड्डामा आइतबार सकिएको पृतनापति समन्वयात्मक बै,ठकमा उच्च सै,निक अ,धिकारीबीच यही प्रश्नको सेरोफेरोमा छलफल भयो ।
चीन र भारतका सै,निकबीच सी,मा क्षेत्रमा भएको भि,डन्त, त्यसले नेपाललगायत क्षे,त्रीय तथा अ,न्तर्राष्ट्रिय सु,रक्षामा पार्न सक्ने असरबारे छलफल भएको हो । दुई छिमेकी मुलुकका सै,निकबीच लद्दाखको गलवान उपत्यकामा बढेको त,नाव, त्यसले नेपाललाई पार्न सक्ने सु,रक्षा प्र,भावबारे खुलेरै छलफल भएको सै,निक स्रोतले जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार वि,ज्ञप्ति निकाली वार्ताका माध्यमबाट जारी त,नावको स,माधान गर्न चीन र भारतलाई आ,ग्रह गरिसकेको छ । नेपालले दुवै छिमेकीलाई सी,मा स,मस्या शा,न्तिपूर्ण रूपमा सुल्झाउन सु,झाव दिएको हो । जं,गीअड्डामा भएको पृतनापति बैठकमा पनि चीन–भारत सी,मा स,मस्या र त्यसले नेपाललाई पार्न सक्ने सम्भावित असरको विषयले प्रवेश पाएको हो । बाह्य ग,तिविधिले नेपालको आ?न्तरिक सुरक्षामा उत्पन्न गराउन सक्ने चु,नौतीबारे बैठकमा छलफल चलेको थियो ।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले चीन र भारतबीच बढेको त,नावले नेपालमा के कस्तो सु,रक्षा चु,नौती बढ्न सक्छ ? त्यसको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने धा,रणा राखे । त्यसबाट नेपाललाई पर्न सक्ने असर, त्यसले उत्पन्न गराउन सक्ने चु,नौती विश्लेषण गरी सोहीबमोजिम र,णनीति र कार्ययोजना तयार पार्न उनले स,म्बन्धित विभागलाई नि,र्देशन दिएका छन् । याे खबर अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छ।